Muujinta isleeg ka 31 ilaa 32 Bogga 7 - Fadlan U Gudub Dhamaadka Si Aad U Aragto Natiijooyin Badan
CuS + H2SO4 → H2S + CuSO4
naxaas (ii) baaruud acid sulfuric hydrogen sulfide naxaas (ii) sulfate
(rnn) (digo yaraa loãng) (kh) (digo yara)
(ka) (xoog leh) (jacayl, jacayl dhab ah) (xanh lam)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta CuS + H2SO4 → H2S + CuSO4
Waa maxay xaaladda falcelinta ee CuS (copper(ii) sulfide) ay kaga falceliso H2SO4 (sulfuric acid)?
How reactions can happened and produce H2S (hydrogen sulfide) and CuSO4 (copper(ii) sulfate) ?
Dhacdada ka dib CuS (copper(ii) sulfide) waxay la falgashaa H2SO4 (sulfuric acid)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada CuS + H2SO4 → H2S + CuSO4
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta CuS (ii) sulfide
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CuS (copper(ii) sulfide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CuS (ii) sulfide ahaan falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2S (sulfuric acid)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2S (hydrogen sulfide) alaab ahaan?
Cu + H2SO4 → H2 + CuSO4
copper acid sulfuric hydrogen naxaas (ii) sulfate
( ma aha ) (xoog leh) (xoog leh) (xanh lam)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Cu + H2SO4 → H2 + CuSO4
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa H2 (hydrogen) iyo CuSO4 (naxaas (ii) sulfate)?
Ku rid muunada Cu-ga tijaabada-tuubada ay ku jirto xalka dheecaanka ee H2SO4 acid, oo aayar u rux.
Awoodda yareynta naxaasta ayaa ka sarraysa hydrogen (haddii si kale loo dhigo, Cu wuxuu ka dambeeyaa H2 taxanaha ficillada birta), sidaa darteed Cu kuma falcelinayo xalka H2SO4.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Cu + H2SO4 → H2 + CuSO4
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2 (sulfuric acid)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2 (hydrogen) alaab ahaan?
Muujinta isleeg ka 31 ilaa 32 Page 7